होटल क्वारेन्टिनका नाममा ठगी, सरकारी संयन्त्र किन बन्दैछन बेमतलबी ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » होटल क्वारेन्टिनका नाममा ठगी, सरकारी संयन्त्र किन बन्दैछन बेमतलबी ?
होटल क्वारेन्टिनका नाममा ठगी, सरकारी संयन्त्र किन बन्दैछन बेमतलबी ?
nepaltube Published On : 23 September, 2020
(सिसिएमसी)का प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद गुरागाईसँग यस बिषयमा नेपाल ट्युबले जानकारी लिदा उहाँ होटेलको व्यवस्थाको बारेमा आफुलाई थाहा नभएको र पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भन्दै फन्छिनुभयो । यसपछि हामीले पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयमा टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ । मन्त्रालय पनि पर्यटन विभागको जिम्मेवारी भएको भन्दै जवाफ दिनबाट पन्छियो । सरोकारवाला सरकारी निकाय एकअर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि विदेशबाट आउनेहरु सीसीएमसीले निर्धारण गरेको होटल र सोही अनुसारको मुल्य तिरेर स्वदेश आउँदै अर्कै सामान्य होटलमा बस्नुपर्ने । यो तथ्यले उद्धार उडानको होटल क्वारेन्टिनका नाममा समेत ठूलै अनियमितता भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ ।
पाँच तारे होटलमा एक जना बस्दा नौ हजार र दुई जना साझेदारीमा बस्नका लागि प्रतिव्यक्ति छ हजार तोकिएको छ । यस्तै, चारतारे होटलमा एक जनाको आठ हजार र दुई जनाको हकमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार ५ सय, तीनतारे तथा डिलक्स रिसोर्टमा एक जनाको ६ हजार तोकिएको छ । दुई जनाको हकमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार, दुई तारेमा पाँच हजार र दुई जना भएमा प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५ सय तोकिएको छ । शुल्क तिरे अनुसार उद्धार गरिएका नेपालीले होटल नपाउँदा र सरकारी पक्षबाट नै होटलको व्यवस्थापन नहँुदा उद्धारमा समेत ठगी धन्दा चलिरहेको छ । कतिपय होटल क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिरहेको होटल व्यवसायी नै विदेशबाट आउनेहरुलाई राखे वापत सरकारले खडा गरेका बिचौलियाहरुलाई कमिसन दिनुपरेको स्विकार गरिरहेका छन् ।